दिउँसो बादल लाग्दैमा सूर्य अस्ताएको हुँदैन, बजार कुनै हालतमा बियरिस भएको होइन - Arthasansar
दिउँसो बादल लाग्दैमा सूर्य अस्ताएको हुँदैन, बजार कुनै हालतमा बियरिस भएको होइन
शुक्रबार, १७ मंसिर २०७८, १३ : ५५ मा प्रकाशित
अम्बिका प्रसाद पौडेल सेयर बजार र लगानीको क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो। विक्रम सम्बत २०२८ मा स्याङ्ग्जामा जन्मिएका पौडेल २०४८ सालमा उच्च शिक्षा अध्ध्ययन गर्ने सिलसिलामा काठमाण्डौ प्रवेश गरे। उनी कलेज पढ्दै गर्दा सेयर बजार बुलिस चरणमा रहेछ। अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालहरु त उतिबेला थिएनन् , तर पत्रपत्रिकामा हरेक दिन सेयर बजार बढेको, नेप्सेले नयाँ किर्तिमान कायम गरेको जस्ता समाचारहरु आउने गर्दथे ।
व्यवस्थापनका विद्यार्थी भएका कारण सेयर बजारको सामान्य जानकारी उनमा छँदै थियो । बजार बढिरहेको र बजारमा प्रसस्त कमाइ हुने सुनेर आफूसँग भएको अलिअलि पैसा अनि आफन्त र साथीभाईसँग अलिअलि सापटी लिएर उनले सेयर किने। बजारको बुलिस र बियरिस चक्रको राम्रो ज्ञान नपाएका उनले त्यतिबेला बजारमा बुलिस चरण सकिने बेलातिर सेयर किनेका रहेछन् ।
बजार प्रवेशको सुरुवाती चरणमै आफ्नो लगानी डुबाएका पौडेल सेयर बजारबाट बिरक्तिएर निजामती सेवाको तयारीमा लागे। पहिलो प्रयासमै लेखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएका पौडेल सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको केही समयपछि बजारमा फेरी बुल रन सुरु भयो। उनले पहिले किनेका कम्पनीहरुको मूल्य पनि मज्जाले बढ्न थाल्यो । सेवामा रहँदै गर्दा सेयर कारोबारमा रमाउन थालेका उनी बजारबाट मनग्गे कमाउन सफल भैसकेपछि थोरै तलव आउने सरकारी जागिर भन्दा मज्जाले कमाउन सकिने सेयर बजार नै आफ्ना लागि अनुकुल रहेको निष्कर्षमा पुगे र लेखा अधिकृतस्तरको सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिइ पुँजीबजार र लगानीको क्षेत्रमा लागे ।
सेयर बजारलाई मैले आफैँले डोहोर्याउन सक्छु, बजारलाई मेरो बाटोमा हिडाउन सक्छु भन्ने घमण्ड केही साथीहरुमा, केही संस्थामा देखिरहेको छु । बजारलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ बजारले आफ्नो औकात देखाईदिन्छ ।
पुँजीबजार र लगानीको क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पौडेलको सेयर बजारको यात्रा र अनुभव गज्जबको छ। धेरै आरोह-अवरोह झेल्दै, कुनै एक समयमा आफ्नो मात्र नभई आफुले व्यवस्थापन गरेको हाथवे इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको समेत नेटवर्थ कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुर्याएका पौडेल निरन्तरको अध्ययन, मेहनत र साधनपश्चात् आजको अवस्थासम्म आइपुगेका छन् । हाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पुँजीबजार फोरमका सभापति समेत रहेका पौडेल नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र चन्द्रागिरी हिल्सका सञ्चालक पनि हुन्। आजको यो अंकमा पुँजीबजार र लगानीको क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल तिनै अम्बिका प्रसाद पौडेलसँग गरिएको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ । आशा छ, नेपालको सेयर बजार र लगानीको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका पौडेलसँगको कुराकानी हाम्रा पाठक वर्गको लागि पठनीय, ज्ञानवर्द्धक र प्रेरणादायी हुनेछ।
१ .हाम्रो देशमा सरकारी जागिरलाई निकै आकर्षक मानिन्छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसक्नुभएको व्यक्ति, करिब १० वर्ष सेवामा बिताउनु पनि भयो, त्यो बीचमा त्यस्तो के भयो र अधिकृतस्तरको सरकारी जागिर छोडेर पुँजी बजारमा पूर्णकालीन रुपमा लाग्नुभयो ?
हो के भन्दाखेरी आफ्नो-आफ्नो स्वभावको कुरा हो । म स्वभावैले पहिलेदेखि नै रिस्क टेकर हो। पहिला बजारमा लागेँ, डुबेँ । त्यसपछि सेयर बजारलाई चटक्कै छोडेर पढ्न थालेँ। निजामति सेवामा गएँ। जोखिम लिने व्यक्तिले जोखिममा विकल्प खोज्छ। म निजामती सेवामा रहँदै गर्दा सेयर कारोबार गर्न थालेँ। राम्रो कमाइ पनि हुन थाल्यो। जति जोखिम लिएँ, त्यो भन्दा बढी रिवार्ड पाउन थालेँ । त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मेरो लागि सेयर बजारको क्षेत्र नै बेटर हो। निजामति सेवामा सर्भाइभ मात्र हुने हो , जोखिम लिन चाहनेलाई बढी सम्पत्ति कमाउने अभिलाषा हुन्छ। जोखिम लिनेले नै कमाउने हो , यही दुनियाको नियम हो । मलाई पनि सर्भाइभ हुन चाहिँने भन्दा बढी सम्पत्ति कमाउने अभिलाषाले सेयर बजारतिर डोहोर्यायो।
२. तपाईँले बजारमा धेरै आरोह अवरोहहरु भोग्नुभएको छ। धेरै वटा बुल र बियरहरुको अनुभव संगाल्नुभएको छ। आफ्नो अनुभव छोटोमा बताइदिनुस् न ।
सेयर बजारमा सँधै आरोह - अवरोह आउछ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै सेयर बजारमा उतार चढावहरु आउने गर्दछन् । मैले धेरै आरोह अवरोहहरु देखेको छु। यतिका वर्ष सेयर बजारमा बिताउँदा मैले अनुभव गरेको मुख्य कुरा भनेको सेयर बजारमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको सही समयमा सेयर बेच्नु हो। किन्न त सबैले जान्दछन् । तर बेच्न जान्दैनन्। आरोह -अवरोहहरुबाट बच्नको लागि सेयर किन्ने बेलामा नै कुन मूल्यमा, कतिखेर सेयर बेच्ने भनेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा समयमा एउटा आइटममा कति पर्सेन्ट नाफा खाएर सन्तुष्ट हुने भन्ने कुरा तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दा बजार एउटा बुलिस ट्रेन्डबाट वियरिश ट्रेन्डमा जाँदा धेरैले गुमाउने गर्दछन् । पहिला -पहिला त त्यो रोदन सुनिँदैनथ्यो, तर अहिले त सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यो क्रन्दन सुनिन्छ। राम्रो ज्ञान, नियमित अध्ययन र राम्रो सेलिङ्ग रणनीतिले नै लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा सफल तुल्याउँदछ ।
३ . यतिका वर्ष पुँजी बजारमा बिताउनुभयो । अहिले पछाडी फर्केर हेर्दा आफुले गरेका कामहरु मध्ये तपाईँलाई मैले यी कामहरु चाहीँ साच्चिकै राम्रो गरेँ जस्ता लाग्ने कामहरु कुन-कुन हुन् ?
पुँजीबजार र लगानीका क्षेत्रहरुमा मैले गरेका केही कामहरु गौरव गर्न लायकका छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। करिब करिब बन्द भएको र नेगेटिभ नेटवर्थ भएको कम्पनी, अहिलेको आइएमई जेनेरल इन्स्योरेन्स , त्यो बेलाको NB इन्सुरेन्सलाई टेकओभर गरेर यो अवस्थासम्म ल्याईपुर्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु। समस्याग्रस्त अरुण फाइनान्सलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त घोषित गराई ग्लोबल आइएमइ बैंकमा मर्ज गराएको छु। सुरुवातदेखि कम्पनी दर्ता गरेर आजको अवस्थासम्म चन्द्रागिरी हिल्सलाई ल्याइपुर्याउने काममा सहभागी हुने अवसर मलाई प्राप्त भयो। यी सबै कामहरु सम्झिँदा मलाई खुसी लाग्छ। नेपालको पुँजीबजारको क्षेत्रमा केही योगदान गर्न सके कि भन्ने पनि लाग्छ।
४ .अहिले सम्झिँदा पश्चाताप लाग्ने वा त्यतिबेला त्यसो नगरेको भए अहिले अझै राम्रो हुने रहेछ जस्तो लाग्ने कुनै काम वा घटनाहरु छन् ?
त्यस्ता घटनाहरु हुँदै नहुने भन्ने छैन। बजारको उतार चढावको क्रममा जीवनभर मेहनत गरेर कमाएको पैसा २ वर्षको अवधिमा लगभग सबै गुमाएको पनि छु। १८०० मा किनेको सेयर ८० रुपैयाँमा बेचेको पनि छु। त्यसपछि नै मैले सेयर किनेपछि बेच्न पनि जान्नुपर्छ भन्ने स्लोगन नै बनाएको हुँ नी ।
५ . सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाईंको धेरै नै आलोचना हुने गरेको छ नी ?
मलाई सोसल मिडियामा धेरैले गाली गर्नुहुन्छ। साथीहरु आफु सही समयमा बेचेर निस्किन जान्नुहुन्न अनि कसलाई दोष दिने भनेर पात्र खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। दोषको भारी बिसाउने चौतारी खोज्ने त मान्छेको विशेषता नै हो नी । म त्यो बुझ्छु । उहाँहरुले अहिले जुन कुरा भोग्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा मैले धेरै अघि भोगेर, अनुभव गरेर आएको हुँ।
६ . सेयरमा सफल हुन चाहिने कुराहरु चाहीँ के-के रहेछन् ?
-आफुले खरिद गर्ने कम्पनीको वित्तिय अवस्था थाहा हुनुपर्छ ।
-मार्केट कुन चरणमा छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। सेयरको मूल्य प्रतिफलले मात्र निर्धारण गर्दैन, अन्य विभिन्न फ्याक्टर हरुले पनि त्यसमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । ती फ्याक्टरहरुको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो ।
- आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण गरेर सेयरमा पैसा लगाउनु भएन ।
- आफ्नो स्व- अध्ययन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो , भाइसाथीको लहै-लहैमा लागेर सेयर कारोबार गर्नु धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
- रिवार्डलाई भन्दा पनि रिस्क्लाई एकदमै आँकलन गर्नुपर्छ। बजारमा अनेकौँ अवसरहरु आउछन्, ती अवसरहरुलाई ग्र्याब गर्न ब्याकअप फण्डको राम्रो व्यस्थापन गर्नुपर्छ ।
७ . बजार बियरिस हुँदा करिब २ वर्षको अवधिमा आफ्नो मात्र नभएर आफुले व्यवस्थापन गर्दै आएको हाथ्वे इन्भेस्टमेन्टको समेत नेटवर्थ करिब करिब कोल्याप्स गराएँ भन्नुभयो, त्यो अवस्थालाई ल्याण्डिङ्ग गरेर कसरी अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नुभयो ?
सेयरले सधैँ दिन्छ, सधैँ फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाँही सेयरले नमज्जाले डुबाई पनि दिन्छ। अनि छोटो समयमा सेयर बजार बुझ्न सकिँदैन। १/२ वटा बुल र बियरको साइकल नहेरी बजारमा परिपक्व भईँदैन।
सेयर बजारलाई मैले आफैले डोहोर्याउन सक्छु, बजारलाई मेरो बाटोमा हिडाउन सक्छु भन्ने घमण्ड केहि साथीहरुमा, केहि संस्थामा देखिरहेको छु। सायद म पनि त्यतिबेला त्यो लहडमा, त्यो युवा जोशमा लागेँ होला। जब मैले त्यो कुरा मन गरेँ, मैले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारे र ति गल्तिहरुबाट सिकें। त्यहि सिकाइले मलाई यो ठाउसम्म ल्याइपुर्यायो। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, यसअघिको वियरमा पनि हामीलाई खासै केहि असर भएन र अब आउने वियरले पनि मलाई चाहिं छुदैन।
८ . प्राविधिक विश्लेषणको बारेमा तपाइँको के धारणा छ ? प्राविधिक विश्लेषणमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?
प्राविधिक विश्लेषण केही पनि होइन म भन्दिन। त्यो एउटा विशिष्ट विद्या हो। बजारमा धेरै विज्ञ साथीहरु आइसक्नुभएको छ। उहाँहरुको फलोअरहरु बनिसकेको अवस्थामा उहाहरुको प्रेडिक्सनले मार्केट सेन्टिमेन्टमा असर गर्नु स्वभाविक हो ।
म डे टु डे ट्रेड गर्दिन। एउटा विशेष फण्डाको आधारमा कारोबार गर्ने गर्छु। म आफु चाहिँ व्यक्तिगत रुपमा प्राविधिक विश्लेषणलाई त्यत्ति फलो गर्दिन। म आफ्नै किसिमको व्यावहारिक /मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्छु।
९ . उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमको सभापति हुनुहुन्छ। समितिले पुँजी बजार सुधारको लागि खासै केही गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले यतिखेरको कुरा गर्नुपर्दा लगानीकर्ताको प्राथमिकता र राज्यको प्राथमिकता फरक देखियो। विशेषगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४/१२ को क्याप हटाउने वा त्यसलाई केही खुकुलो पार्ने लगानीकर्ताहरुको जुन अपेक्षा थियो,त्यसो हुन सकेन। हामीले आवाज नउठाएको होइन , महासंघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ, सार्वजनिक रुपमा पनि लगानीकर्ताको हितमा नीति बन्नुपर्छ भनेर बोलेका छौं। पुँजीबजार फोरमको भूमिका कमजोर भएको होइन, समय र परिस्थितिले गर्दा त्यस्तो देखिएको हो।
१० . तपाँई सञ्चालक रहनुभएको बजारका हटकेक कम्पनीहरु NTC र CGH को बारेमा केहि भनिदिनुस् न ।
CGH लकडाउनले आक्रान्त रह्यो। भोलिका दिनमा त्यो प्रोजेक्टले राम्रो गर्नेछ। लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अलिकति समय चाहिँ लाग्ने भयो।
NTC एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ। केहि बर्षअघिसम्म Ncell को रेभिन्यु बढी थियो। अहिले NTC अगाडी छ। 4G नेपालभरी विस्तार भैरहेको छ। नेटवर्थ, एसेट्सका हिसाबले पनि NTC उत्कृष्ट कम्पनी हो। आगामी दिनमा पनि NTC उत्कृष्ट कम्पनीको रुपमा नै रहनेमा म विश्वस्त छु।
११ . एकदमै स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा अबको बजारको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ ? के बजार बियरिस चरणमा प्रवेश गरेको हो र ?
बजारमा आरोह अवरोह स्वभाविक हो। बजार ११/१२ सयको विन्दुतिर हुँदा गरेको फोरकास्ट्मा म अहिले पनि अडिग छु। विभिन्न लजिकको आधारमा, विभिन्न डेटाहरु अध्धयन गरेर हेर्दा बजारमा आगामी दिनमा नयाँ उचाइ र नयाँ उल्लास देख्न पाइनेछ। अहिले बजार करेक्सनको फेजमा छ।
दिउँसो १२/१ बजे बादल लाग्दैमा सूर्य अस्ताएको हुँदैन। बजार कुनै पनि हालतमा बियरिस भएको होइन । छिट्टै बादल फ़ाट्नेछ, झलल उज्यालो हुनेछ।